3rd edition ye "Mazuva eLatvia" anovhura muItari
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » 3rd edition ye "Mazuva eLatvia" anovhura muItari
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • Latvia Breaking Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Chinyorwa chechitatu che "Mazuva eLatvia" chakatangwa muRome, pamberi paBaltic State Mutungamiri, Raimonds Vejonis. Chiitiko chekusimudzira chekutsinhana kwekutengeserana pakati peLatvia neItari chakarongeka neArhente yeInvestments uye Kubudirira kweLatvia (LIAA), pamwe nekubatana neEmbassy yeRepublic yeLatvia muItari.
Iyo "Mazuva eLatvia" ine khalenda yezviitiko, misangano b2b uye zviitiko zvetsika, zvichaitirwa muRome, Milan neVenice, kusvika Mbudzi 24th 2019.
Kugadzwa kwekutanga muRome, 'Ravidza Latvia,' yaive chiitiko chebhizimusi rekubatanidza, pamwe nekuravira kwezvakagadzirwa zvigadzirwa uye ndiro dzakagadzirwa nemubiki weLatvia Maris Jansons, ichiperekedzwa nemutambo nemuimbi weLatvia Līga Liedskalniņa weDuo "Ramtai".
Ichazotevera, mukati memazuva mashoma anotevera, nekuratidzwa kwezvakagadzirwa neveLatvia vapfuri vegoridhe Anita Savicka naAnna Fanigina, yakarongerwa kumusangano wezvishongo weSimonelli.
"Nyika dzedu mbiri dzakabatana nehukama hwakasimba hwehukama netsika uye tinotarisira kuti chiitiko ichi chinogona kuburitsa hukama hwekutengeserana uye mukana wekudyidzana pakati pemakambani," akadaro Mutungamiriri wenyika yeLatvia.
Chiitiko ichi, kutaura zvazviri, ndechekupa muongororwo weLatvia - kubva pakuona zvimwe zvikamu zvine hunyanzvi, senge tekinoroji uye kushanya, kusvika pamikana yekuvandudza mabhizinesi, nekuda kweiyo chaiyo mutero hutongi, kune vanokurumidza uye mabhizimusi ekufambisa, kutsigira neruzhinji kuvandudzwa kwehunyanzvi, pamwe nekubudirira kweruzivo uye zvigadzirwa, zvakagadzirwa nemakambani eLatvia.
Munguva ye 'Mazuva eLatvia' misangano yakawanda ye b2b ichasimudzirwa yakananga neLIAA, iyo hurumende yeLatvia agency yekusimudzira kusimudzira bhizinesi, iyo inofambisa mari dzekune dzimwe nyika, uye panguva imwechete inowedzera kukwikwidza kwevatengesi veLatvia pamusika wepamusha uye kunze kwenyika.
State Agency, inozvirumbidza makumi maviri emahofisi ekumiririra kunze kwenyika, iriwo mutumbi unoona nezve kusimudzira kushanya kuLatvia. Kutenda nendege dzakananga dzeAir Baltic, dzinoshanda kubva kuRome, Milan neVenice, marwendo matsva emapakeji ari kupihwa.